Abakhiqizi Bohlelo lweWDM | I-China WDM System Factory & Abahlinzeki
I-100G Transponder / Converter
I-100G OTN Transmitter isekela i-interface eyodwa yeklayenti le-QSFP28 kanye ne-interface eyodwa eseceleni ye-CFP ukusekela ukudluliswa kwedatha okusanhlamvu okukodwa kwe-100Gbps. Ubuchwepheshe obuhambisanayo kakhulu embonini kanye nobuchwepheshe bokufaka amakhodi bokulungisa amaphutha obuphambili be-FEC buvumela ukudluliswa kokusebenza okuphezulu okunamandla amakhulu.
I-200G Muxponder 2x100G iguqukela ku-200G
I-SFP + Multi-Rate Quad Transponder 10Gbps Repeater / Converter / Transponder
I-SFP + Multi-Rate Quad Transponder inezikhala eziyi-8 SFP +, Idivayisi ihlinzeka ngokudluliswa okuguqukayo kwezivumelwano ezahlukahlukene, njenge-1G / 10G Ethernet, i-SDH STM16 / STM64, OTU1 / OTU1e / OTU2 / OTU2e, iFiber Channel 1/2/4/8 / 10, CPRI, njll. I-SFP + transponder isekela ukusebenza kwamazinga amaningi ngamazinga wedatha ye-optical kusuka ku-1Gbps kuya ku-10Gbps; Ububanzi obuningi bezixazululo zengqalasizinda ebonakalayo buhlanganisa ukuguqulwa kwemidiya, ukuphindwa kwesiginali, ukuguqulwa kwe-lambda.
I-40G ne-100G Isibonisi
I-40G & 100G Muxponer isekela i-4x10G↔40G noma i-4x25G↔100G ungqimba lwe-multiplexing / demultiplexing, futhi iguqula amasiginali we-multiplexed / demultiplexed optical ibe yi-DWDM standard wavelength optical signals. nge-DWDM MUX / DEMUX, amashaneli amaningi we-100G noma ama-40G amasevisi adluliselwa ohlelweni lwe-DWDM. I-40G & 100G Muxponder yisisombululo esiphansi kunazo zonke sokudluliswa kwenethiwekhi yedolobha le-DWDM le-100G.
40G & 100G OEO Isiguquli
I-40G ne-100G Transponder isekela ukufinyelela kwe-40G noma kwe-100G. Ububanzi obuningi bezixazululo zengqalasizinda ebonakalayo buhlanganisa ukuguqulwa kwemidiya, ukuphindwa kwesiginali, ukuguqulwa kwe-lambda.
I-SFP28 Multi-Rate Quad Transponder 125M ~ 32G Repeater / Converter / Transponder
I-SFP28 Multi-Rate Quad Transponder inezikhala eziyi-8 SFP28, Idivayisi ihlinzeka ngokudluliswa okuguquguqukayo kwezivumelwano ezahlukahlukene, njenge-100M / 1G / 10G / 25G Ethernet, i-SDH STM1 / STM4 / STM16 / STM64, i-Fiber Channel 1/2/4/8 / 10/16 / 32Gbps, i-CPRI, njll.
I-Transfonder ye-SFP28 isekela ukusebenza kwamazinga amaningi ngamazinga wedatha ye-optical kusuka ku-1Gbps kuze kufike ku -32Gbps; Ububanzi obuningi bezixazululo zengqalasizinda ebonakalayo kufaka ukuguqulwa kwemidiya, ukuphinda kwesiginali, ukuguqulwa kwe-lambda.
I-Redundant Multi-Rate Dual Transponder 10 Gbps Repeater / Converter / Transponder
Le transponder iyi-10G fiber to fiber 3R converter repeater kanye ne-transponder. Le transponder isekela ukuxhumeka kwe-SFP + kuya ku-SFP + noma i-XFP ku-XFP. Ukushintshwa kwe-1 + 1 okuzenzakalelayo kokuvikelwa kokuvikela kusekelwa amatheku we-Line. I-transponder isebenza ngokusobala, ihlinzeka nge-3R (Re-amplification, Re-shaping and Re-clocking) phakathi kwalezi zinhlobo zemoduli ezihlukile.
Blue / Red EDFA Optical zesikhulisa
Amamodeli we-Single Fiber Bidirectional EDFA Amplifier afaka iRed kanye nechweba eliluhlaza okwesibhakabhaka elenzelwe i-fiber eyodwa ye-DWDM Solution. Idizayini yalezi zinhlobo isetshenziselwa amasistimu wokudlulisa we-single-fiber DWDM.
Ukufinyelela esigabeni esiphakathi kwe-EDFA Optical Amplifier-PA Card
Ngokusetshenziswa kwezinhlelo zamabanga amade kuya ngokuya kukhula, ukufinyelela kwesigaba esiphakathi kwenkampani yethu (i-MSA) i-EDFA, ukufinyelela kwesigaba esiphakathi (i-MSA) i-EDFA kungaxazulula ngempumelelo ukulahleka kokufakwa okubangelwe yiDCM ne-OADM, kususe iDCM futhi Amaqembu e-OADM. Ukulahleka kokufakwa okuvelayo kunciphisa ukonakala okwengeziwe kohlelo lwe-OSNR.
I-EDFA Optical amplifier - I-Booster Amplifier
I-EDFA Optical Amplifier mi-odule inikezela ngemisebenzi eminingi, umsindo ophansi, izixazululo ze-Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA), Imodyuli ye-amplifier ingaqhutshwa ngokuzuza njalo (i-Automatic Gain Control AGC), amandla okukhipha njalo (i-Automatic Power Control, i-APC). I-VOA edidiyelwe ingalungiswa ngokuzenzakalela ukuze izuze ukubushelelezi kwenzuzo ebushelelezi. Ingakhulisa isignali ye-C-Band nge noma w / o ukufinyelela esigabeni esiphakathi (i-MSA), okuletha ukuguquguquka okuhle kohlelo lokusebenza lwenethiwekhi.
Idivayisi Yesinxephezelo se-DCM yokuhlakazeka
Umsebenzi wesinxephezelo se-Huanet ophethe isinxephezelo sokusakazeka kwethambeka le-fiber yemodi eyodwa ejwayelekile i-DCM (G.652) ibingukuhlakazeka nokusabalaliswa kwesinxephezelo sebhendi ebanzi ku-C-band, okuvumela uhlelo ukuthi lwenze ukusabalalisa okusalile. Kumanani okusabalalisa we-1545nm wavelength angafika -2070ps / nm.
Amamojula Wokuhlakazeka Wokuhlakazwa akha amabhlokhi we-HUA6000 Optical Transport System futhi asebenza kuma-optical node wokuxhumana ukulungisa isimo sokusakazwa kwenhliziyo okwaziwa ngokuthi yiChromatic Dispersion esinciphisa ibanga lokudluliswa kwedatha emicimbini ye-optical fibers.
I-Sfp C ++, Optical Fibre Module, Intengo ye-Huawei Olt, IHuawei Qsfp +, Transmitter Wangaphandle Transmitter, I-Xfp Transceiver,